थोरै मात्र मुद्धा हारेका डा. भीमार्जुन आचार्यले हेर्दैछन् चुडामणि शर्माको मुद्धा ! यसपाली कसका पक्षमा आउला फैसला ?
ARCHIVE, INVESTIGATION, MUDRA MAMILA » थोरै मात्र मुद्धा हारेका डा. भीमार्जुन आचार्यले हेर्दैछन् चुडामणि शर्माको मुद्धा ! यसपाली कसका पक्षमा आउला फैसला ?
काठमाडौँ - डा. भीमार्जुन आचार्य । चर्चित वकिल । उनले जीवनमा थोरैमात्र मुद्धा हारेका छन् । त्यहि भएरपनि होला उनलाई चुडामणि शर्माले आफ्नो वकिल बनाएका छन् । जीवनमा खासै मुद्धा नहारेका आचार्यले यो मुद्धा पनि हार्दैनन् भन्ने चर्चा एकातर्फ छ भने यो मुद्धा हारे भने उनले जीवनमा हारेको सबैभन्दा ठुलो मुद्धा हुनेछ यो ।
चुडामणी शर्मासँग ३ अर्ब रुपैयाँ धरौटी मागिएसँगै अव आचार्यले मुद्धा जित्छन् भन्ने अड्कल काट्नेहरु बढेका छन् । मंगलबार मात्र शर्मालाई थुनामा राख्ने काम गैरकानुनी हो भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ । भीमार्जुन आचार्य यसको चर्को तयारीमा रहेको स्रोतको दावी छ । धरौटी रकमका बारेमा शर्माले आफ्ना वकिल डा. भीमार्जुन आचार्यसँग उक्त दिननै परामर्श गरेका थिए ।
अख्तियारले मागेको धरौटी रकम अहिलेसम्मकै ठूलो रकम धरौटी बुझाएमा शर्मा हिरासतमुक्त भएर मुद्दा लड्न सक्छन् । अख्तियारले केही दिनमै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अख्तियारले मुद्दा हालेपछि कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने कुरामा आचार्यले आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन् । शर्माका पक्षमा वढिभन्दा वढि वकिल जुटाउन उनी क्रियाशील छन्।
राजश्वसम्बन्धी सबैभन्दा ठुलो मुद्धा भएकाले यो प्रकरणसँगै भीमार्जुन आचार्यको करियर जोडेर चर्चा गर्नेहरुपनि बढेका छन् ।